Torolalana ho an'ny IOS 15: Fanamarihana, fampahatsiahivana ary feo mandeha amin'ny laoniny | Vaovao IPhone
Ny rehetra momba ireo fiasa vaovao ao amin'ny iOS 15: Notes, Reminders and Background Sound
Miguel Hernandez | 28/09/2021 15:00 | iOS, iOS 15, iPhone, Fampianarana sy torolàlana
iOS 15 dia fampahalalam-baovao marina sy marina. Raha nieritreritra ianao fa efa nahafantatra ny zava-drehetra dia diso ianao, amin'ny Actualidad iPhone dia manohy miasa miaraka amin'ny iOS 15 sy iPadOS 15 amin'ny fitaovanay rehetra izahay mba hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ny iPhone sy iPad-nao.
Atorinay anao lalindalina kokoa ny fiasa Notes sy Reminders vaovao ao amin'ny iOS 15, ary koa ny safidy Background Sounds vaovao izay hanamora ny fiainanao. Jereo miaraka aminay hoe inona avy ireo endri-javatra rehetra ireo sy ny fomba fampiasanao azy ireo ho toy ny tena matihanina amin'ny iPhone sy iPad.
1 Ny vaovao rehetra momba ny Notes amin'ny iOS 15
1.1 Ahoana ny fomba hanonona ny mpampiasa teny
1.2 Ahoana ny fomba hanampiana tag
1.3 Folaka fanamarihana maranitra
2 Ny vaovao rehetra an'ny Reminders ao amin'ny iOS 15
2.1 Ahoana ny fomba hanampiana tag amin'ny fampahatsiahivana
2.2 Ahoana ny fomba hanomezana fampahatsiahivana amin'ny olona iray
2.3 Lisitry ny fampahatsiahivana marani-tsaina
3 Feon-tsary, endri-javatra mahaliana
3.1 Ahoana ny famadihana ny feo ambadika
3.2 Ampifanaraho ny feo ambadika
3.3 Feo afara ao amin'ny Center Control
Ny vaovao rehetra momba ny Notes amin'ny iOS 15
Ny rindranasan'ny Notes dia iray amin'ireo mpandray tombony lehibe tamin'ny iOS 15, na dia teo aza ny zava-misy fa kely ny fanavaozana ny haavon'ny endrika.
Ahoana ny fomba hanonona ny mpampiasa teny
Ny fampiasa voalohany dia ny mitanisa ireo mpampiasa. Mba hanaovana izany, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mizara ny naoty miaraka amin'ny zon'ny fanovana, Mba hanaovana izany dia tsindrio fotsiny ilay kisary eo amin'ny zoro ambony ambony ary manampy mpampiasa iOS na iPadOS 15 amin'ny fampiharana Notes.
Azonao atao ny mijery ny tantaran'ny fanovana ny Notes amin'ny fipihana eo amin'ny kisary (…).
Raha vantany vao ao anaty naoty dia azontsika atao ny manonona azy amin'ny fomba haingana sy mora indrindra, ampiasao fotsiny ny "@" toy ny fanaonao matetika amin'ny WhatsApp na Twitter ary ny mpampiasa dia hanampy anao amina sary mihetsika tena liana ary loko miloko ahafahanao manavaka azy.
Ahoana ny fomba hanampiana tag
Isaky ny mampiasa ny mari-pamantarana pounds "#" isika ary manoratra teny iray avy eo tsy misy habaka, ho noforonina ho azy ny tag, toy ny mitranga ohatra ao amin'ny Twitter. Ireo tag ireo dia hitantana mandeha ho azy ary hahafahantsika mamantatra haingana ny lohahevitry ny naoty. Noho izany, rehefa eo am-piandohan'ny naoty isika dia hanana ny fahazoana ireo mari-pamantarana haingana ary rehefa manindry dia tsy hampiseho amintsika ireo naoty izay mifanaraka amin'ny lohahevitra manokana fotsiny izany.
Folaka fanamarihana maranitra
Toy izany koa, miaraka amin'ny fanampian'ny tag izay efa napetrakay sy nanararaotra ireo mpampiasa izay azonay nampiana tamin'ny naoty, Mahazo mamorona lahatahiry marani-tsaina isika amin'ny fipihana eo amin'ny kisary eo ankavia ankavanan'ny. Raha misafidy ny fampirimana mahira-tsaina isika tsy maintsy manondro anarana isika ary koa ireo marika fa hanangona ny fampirimana hahafahantsika miditra haingana amin'izy ireo. Ity teknolojia ity dia hanararaotra feno ny rafitra Neural Engine an'ny Apple ary hanamora ny fiainantsika mandritra ny fampiharana Notes.
Ny vaovao rehetra an'ny Reminders ao amin'ny iOS 15
Anjaranao ny fampahatsiahivana, fampiharana iray hafa izay novaina be mba hanolorana asa hafa maro kokoa amin'ny fahatongavan'ny iOS 15.
Ahoana ny fomba hanampiana tag amin'ny fampahatsiahivana
Toy ny amin'ny Notes ihany, afaka manome marika ny fampahatsiahivantsika isika, na amin'ny fampiasana ny pad amin'ny keyboard, na mivantana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary «#» eo amin'ny lisitry ny fampiasa haingana izay miseho eo ambonin'ny keyboard Android ihany rehefa manoratra na mamorona fampahatsiahivana vaovao isika.
Ahoana ny fomba hanomezana fampahatsiahivana amin'ny olona iray
Amin'ity tranga ity, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mizara ny naoty miaraka amin'ny zon'ny fanovana, raha vantany vao manao izany isika dia ho afaka hiditra amina fampiasa tena mahaliana, dia ny fanomezana mivantana fampahatsiahivana ho an'ny mpampiasa manokana. Ao amin'ny lisitry ny fampahatsiahivana fampahatsiahivana haingana dia hitantsika ny sarin'ny fifandraisana iray, rehefa manery azy ireo ireo mpampiasa tafiditra ao anatin'io fampahatsiahivana io dia haseho ary tsy maintsy manindry azy fotsiny isika.
Amin'ity tranga ity dia hahazo fampahatsiahivana ny mpampiasa ary hiseho eo akaikin'ny fampahatsiahivana manokana ny sarin'ny Apple ID mba hanondroana fa lahasan'ny mpampiasa miandry izany. Amin'ny ankapobeny, izy io dia ho ilay mpampiasa manokana izay tsy maintsy mameno azy, raha tsy misy ny mpitantana manapa-kevitra ny hanova azy.
Lisitry ny fampahatsiahivana marani-tsaina
Manararaotra indray ireo tag noresahintsika teo aloha, afaka mamorona lisitra fampahatsiahivana marani-tsaina ihany koa isika, noho izany dia mamorona lisitra vaovao fotsiny izahay misafidy ny safidy an'ny "Hanova ho lisitra marani-tsaina" eo ambanin'ny anaran'ny lisitra fotsiny. Ho hitantsika ny lisitry ny tag izay efa nampiarahinay teo aloha ary hamboarina ho azy ny lisitra marani-tsaina, araraotina ny teknolojia Neural Engine an'ny iOS 15.
Feon-tsary, endri-javatra mahaliana
Fahaiza-manao vaovao ny feo lafika fa ny iOS 15 dia nametraka ao amin'ny fizarana Accessibility ary hahafahantsika manampy feo miorina maharitra izay, arakaraka ny toe-javatra, dia hanampy ny olona sasany hifantoka na hiala sasatra mandritra ny asany isan'andro amin'ny iPad na iPhone.
Ahoana ny famadihana ny feo ambadika
Mora ny mampihetsika ny feo afara, noho izany dia tsy maintsy manaraka ity làlana manaraka ity ianao: Fikirana> Azo idirana> Audio / Visual> Feo eo am-piandohana.
Ao anaty no ahitantsika ny mety hampihetsika ity feo ambadika ity amin'ny alàlan'ny switch iOS mahazatra. Raha vantany vao ampandehanana io dia afaka manatanteraka ireo fikirakirana rafitra samihafa isika.
Ampifanaraho ny feo ambadika
Ao anatin'ny fipetrahan'ny feo avy any ambadika, ny fiasa vaovao an'ny iOS 15, azontsika atao ny manatanteraka ny toetran'ny masontsivana sasany. Voalohany, afaka misafidy ny lisitry ny feo izay alaina isika rehefa mifantina azy ireo:
Toy izany koa, afaka manamboatra ambaratongam-pahefana 100 ho an'ny feo nofidintsika isika, ary koa ny fanitsiana ny fomba famoahana ny feo rehefa mijery na mihaino atiny hafa isika. Amin'ity fizarana ity dia azontsika atao ny mamono azy, na manamboatra azy io ho feo kely ao ambadika.
Miharihary fa azontsika atao ny manararaotra ny safidy amin'ny faran'ny lisitra hangataka amin'ny iOS 15 mba hanafoanana ny feo ambadika rehetra rehefa mihidy ny iPhone, na dia amin'ity tranga ity aza dia hitohy avy hatrany ny playback aorian'ny famohana ny fitaovana.
Feo afara ao amin'ny Center Control
Azonao atao ny mampiditra an'io fampiasa io mivantana amin'ny Control Center mba hampihetsika na hanafoanana azy io haingana, araho fotsiny ny lalana: Fikirana> foibe fanaraha-maso> fihainoana. Anisan'ireo safidy fihainoana dia hiseho ireo feo ambadika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ny rehetra momba ireo fiasa vaovao ao amin'ny iOS 15: Notes, Reminders and Background Sound
Jony Ive sy ny orinasany LoveFrom dia nanao sonia niaraka tamin'i Ferrari
Ny fanovana endrika ny iPhone 14 dia ho zava-dehibe hoy i Mark Gurman